Nabadoon kale oo caan ah oo caaway lagu qaarijiyay Magaalada Kismaayo iyo Ragii dilay oo Baxsaday
Ali Muse Alixzaan Masjid Al-Taqwa Daarulcilimi Somali Sunah naseexo Baro Quraanka maQal iyo muQaal Cilmi Sh Maxamed Cabdi Umal addacwah Somali Quraan Qubacentre Boqolsoon Hanuun Aflax Nabadoon kale oo caan ah oo caaway lagu qaarijiyay Magaalada Kismaayo iyo Ragii dilay oo Baxsaday
Muqdisho (GT)Waxaa caawa Magaalada Kismaayo lagu dilay mid ka mid ah Nabadoonada reer Kismaayo, iyadoo dilkiisa ay geysteen seddex nin oo bistoolado ku hubeysan.
Nabadoonka ayaa waxaa lagu dilay Xaafada Shaqaalaha ee Magaalada Kismaayo, waxaana dhawr xabadood la dhacay niman bistoolado ku hubeysan, oo aan heybtoodu la aqoon.
Dilka oo ay fuliyeen seddex nin oo dhalinyaro ah ayaa waxay isaga baxsadeen Xaafada Shaqaalaha oo ay marxuumka ku dileen, isla-markaana laguma guuleysan in gacanta lagu soo dhigo.
Ciidamada Huwanta oo goobtaasi soo gaaray ayaa waxay ka sameynayaan baadi goob ay ku raadinayaan seddexdii nin ee dishay Nabadoonkaan, oo magaciisa lagu soo koobay Nabadoon C/Laahi.
Dadna ku dhaqan Xaafada Shaqaalaha ayaa waxay caawa Warbaahinta gudaha ay u xaqiijiyeen dilka Nabadoon C/Laahi, isla-markaana inay baxsadeen seddex nin oo dishay.
Ciidamada Huwanta ayaa waxay dadaal ay ugu jiraan kuwii ka dambeeyay dilka Nabadoonka, inkastoo la sheegay kahor inta aysan soo gaarin goobtii lagu dilay, inay isaga baxsadeen kuwii dilka geystay.
Waa Nabadoonkii labaad oo muddo toddobad ah lagu dilo Magaalada Kismaayo ee Xaruunta Gobolka Jubbada Hoose, iyadoo Khamiistii dhaawac culus loogu geystay Nabadoon Ismaaciil Maxamed Nuur “Qalinle”, inkastoo dhaawacii soo gaaray uu ugu geeriyooday Magaalada Muqdisho.
Nabadoonka caaway la dilay ayaa ka soo jeedo beesha Ogaadeen laakiin lama hubo in dilka nabadoonka caaway la dilay ay la xariirto dilkii nabadoon Qalinle.
Waxii soo kordho kala soco warbaahinta www.gelinsoortimes.com
Gelinsoortimes - Muqdisho